Yusuf Garaad: Ololaha Doorashadu waa Bilo Dhammaystay
Waxaa iyaguna batay muuqaalka baabuurta la yiri xabbaddu ma karto oo ay gelbinayaan kuwa dulbannaanka ah ee ay wiilasha tuuteysan ee luguhu u raaracaan ay qorayaha la dul yuururaan.
Dadkaan isu soo ururay oo dhan waxaan u arkaa wanaag iyo in loo soo jeestay in talo lagu lahaado xulidda Hoggaamiyaha dalka. Waa xaq muwaadddin kasta u bannaan. Waana wax anigu aan ku farxay.
Xilliga lagu jiro ee doorashadu ay soo dhow dahay, olole kasta uu gaaray heerka ugu sarreeya ee uu gaari karo, welina aan codka la qaadin, waa xilli aan ku magacaabo xilliga farxadda. Koox kasta waxaa ay isu aragtaa in ay kursiga soo haaban karto.
Posted by Yusuf Garaad at 14:05:00